I-Perovskite Synthesis yi-Ultrasonication - I-Hielscher Ultrasound Technology
Izimpendulo ezenziwa nge-ultrasonic eziyisisekelo futhi eziqinisiwe zinikeza indlela yokuqamba eyenziwe kahle, eguquguqukayo kanye nokuguquguqukayo enhlobonhlobo yokwenza izinto ezenziwe nge-light-activated, ezivame ukungalungiswa ngamasu ezejwayelekile.
I-crystallization ye-ultrasonic kanye kwezulu zamakristalu e-perovskite kuyindlela ephumelela kakhulu futhi enomnotho, evumela ukukhiqiza ama-nanocrystals e-perovskite esikalini sezimboni ukukhiqizwa kwesisindo.
I-Ultrasonic Synthesis ye-Perovskite Nanocrystals
Ama-organic-inorganic lead halide perovskites abonisa izakhiwo ezihlukile ze-optoelectronic njengokuthwala ukukhanya okukhulu, isikhathi eside sokuthwala isikhathi eside, ubude bokunqobeka kwenkampani, kanye nokuhamba okuphezulu kwensiza, okwenza i-perovskite ihlanganisa izinto ezisetshenziswayo eziphakeme kakhulu kwizicelo ezisebenza kakhulu kumaphaneli elanga, ama-LEDs , ama-photodetectors, ama-lasers, njll.
I-Ultrasonication ingenye yezindlela ezingokomzimba zokusheshisa ukusabela okuhlukahlukene kwe-organic. Inqubo ye-crystallization ithonywa futhi ilawulwa ukwelashwa kwe-ultrasonic, okuphumela ezimeni zesayizi ezinqobekayo ze-single ‐ crystalline perovskite nanoparticles.
Izithombe ze-TEM ze-CH3nH3I-PbBr3 Ama-QD (a) ne futhi (b) ngaphandle kokulashwa kwe-ultrasonic.
I-UIP2000hdT nge-Pressurizable flow cell reaction
Amacala Ezifundo ze-Ultrasonic Perovskite Synthesis
Ucwaningo selwenziwe izinhlobo eziningi zokukhula ngokukhula kwe-perovskite. Ngokuvamile, amakristalu e-perovskite alungiswa ngendlela yokukhulisa uketshezi. Ukuze unike amakristalu e-perovskite, ukuguquguquka kwamasampula okuqondiwe kuhamba kancane futhi kulawulwe kuncishiswe kusisombululo esingaphambili. Ukuhanjiswa kwe-Ultrasonic kwamakristalu e-novskite we-nano kusekelwe ikakhulu ekuqothulweni kwe-antisolvent.
I-Ultrasonic Crystallization ye-Perovskite Nanocrystals
UJang et al. (2016) bika ukuhlangana okusobala okusizwisisekayo okusebenzayo kwe-lead halide perovskite nanocrystals. Usebenzisa i-ultrasound, APbX3 ama-perovskite nanocrystals anezinhlobonhlobo zezingoma, lapho i-A = CH3nH3, Cs, noma i-HN = CHNH3 (formamidinium), no-X = Cl, Br, noma mina, bathola umoya. I-Ultrasonication isheshisa inqubo yokuqedwa kwangaphambi kwesikhathi (AX ne-PbX2) ku-toluene, futhi isilinganiso sokuchithwa sinquma inani lokukhula kwama-nanocrystals. Kamuva, ithimba labacwaningi lazakhela isithombe se-high-sensitivity photodetectors by homogenously spin coating the nanocrystals usayizi omfushane kuzindawo ezinkulu ze-silicon oxide substrates.
Ukusabalalisa kwezinhlayiyana ze-CH3NH3PbBr3 (a) ne futhi (b) ngaphandle kokulashwa kwe-ultrasonic.
I-Ultrasonic Asymetrical Crystallization yePerovskite
Peng et al. (2016) yathuthukisa indlela entsha yokukhula ngokusekelwe ku-crystallization ye-cavitation-triggered asymmetrical crystallization (CTAC), ekhuthaza i-nucleation ye-heterogenible ngokunikeza amandla anele okunqoba umgoqo we-nucleation. Kafushane nje, bethula ama-pulps amafushane kakhulu we-ultrasonic (≈ 1sec) kwikhambi lapho ifika ezingeni eliphakeme lokuthambekisa nge-antisolvent vapor infusion. Ukushiswa kwe-ultrasonic kwethulwa emazingeni aphezulu wokuphakama, lapho i-cavitation ibanga khona izehlakalo ezinkulu ze-nucleation ngakho-ke ukukhula kwe-plethora yamakristalu amancane. Ngokuthembisayo, MAPbBr3 amafilimu ama-monocrystalline akhula ebusweni bezindawo ezahlukahlukene kungakapheli amahora ambalwa ukwelashwa kwe-cyclic ultrasonication.
I-Ultrasonic Synthesis ye-Perovskite Quantum Dots
Chen et al. (2017) abakhona emsebenzini wabo wokucwaninga indlela ephumelelayo yokulungiselela amachashazi we-perovskite quantum (QDs) ngaphansi kwe-Ultradiation irradiation. I-Ultrasonication isetshenziswa njengendlela yemishini ukuze kusheshiswe ukuhanjiswa kwamachashazi we-perovskite quantum. Inqubo ye-crystallization yamachashazi we-perovskite quantum iyaqina futhi ilawulwa wukuphathwa kwe-ultrasonic, okuholela usayizi ofaniswe kahle wama-nanocrystals. Ukuhlaziywa kwesakhiwo, usayizi wezinhlayiyana kanye ne-morphology yamachashazi e-perovskite quantum kubonise ukuthi i-crystallization ye-ultrasonic inika ubukhulu obuncane bezinhlayiyana nokusatshalaliswa kwesayizi kuyunifomu. Kusetshenziswa i-ultrasonic (= sonochemical) synthesis, futhi bekukwazi ukukhiqiza amachashazi we-perovskite quantum ngezingoma zamakhemikhali ezahlukahlukene. Lezo zingoma ezihlukile kumakristalu e-perovskite avunyelwe ukungakwazi ukuphuma iziqongo kanye nemiphetho ye-adsorption ye-CH3nH3I-PbX3 (X = Cl, Br kanye nami), okuholele ku-gamut yombala ebanzi ngokweqile.
I-Ultrasonication yokumiswa kwe-nano kuyizinhlayiyana nama-inks kuyindlela ethembekile yokubasabalalisa homogencwelely ngaphambi kokusebenzisa ukumiswa kwe-nano-substrates efana namagridi noma ama-electrodes. (cf. Belchi et al. 2019; Pichler et al. 2018)
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kusingatha kalula ukugxila okuphezulu okuqinile (isb. Ama-pastes) bese kusatshalaliswa izinhlayiya ze-nano-zinhlayiya ezihlakazekile ezizimele ukuze kukhiqizwe ukumiswa okufananayo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi kwisicelo esilandelayo, lapho i-substrate ihlanganiswa, akukho ukugoqwa okufana ne-agglomerates kuphazamisa ukusebenza kwephakoji.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kulungiselela ukumiswa okungatheni nano-sized: ijika eliluhlaza – ngaphambi kwe-sonication / ijika elibomvu ngemuva kwe-sonication
Ama-processor we-Ultrasonic we-Perovskite Precipitation
Ama-Hielscher Ultrasonics aqamba futhi enze izinhlelo ezisezingeni eliphakeme ze-Ultrason zokwakheka kwe-sonochemical kwezixhobo zekristalu ezisezingeni eliphakeme. Njengomholi wemakethe futhi onolwazi lwesikhathi eside ekusebenzeni kwe-Ultrasonics, iHielscher Ultrasonics isiza amakhasimende ayo kusuka ekuhlolweni kokuqala kokusebenza ukwenza ukucubungula nokwenza ukufakwa kokugcina kwezinqubo zokusebenza kwe-ultrasonics zokukhiqiza ngezinga elikhulu. Ukunikeza iphothifoliyo egcwele kusuka kuma-lab kanye ne-bench-top ultrasonicators kuze kusetshenziswe izinqubo zezimboni ezisetshenziswayo ze-ultrasonic, i-Hielscher ingakuncoma idivaysi efanelekile yenqubo yakho ye-nanocrystal.
Onke ama-ultrasonicators ama-Hielscher angacashunwa ngokunembile futhi angahunyushwa kusuka kumanani aphansi kakhulu ukuya phezulu kakhulu. I-amplitude ingenye yezinto ezibalulekile ezithonya umthelela nokuqothuka kwezinqubo ze-sonication. Hielscher Ultrasonics’ Amaphrosesa we-ultrasonic aletha isibuko esikhulu kakhulu se-amplopes esimboza ububanzi bezinto ezithambile kakhulu futhi ezithambile kwizicelo eziqine kakhulu nezibhubhisayo. Ukukhetha ukulungiselelwa okuhle kwe-amplitude, i-booster ne-sonotrode kuvumela ukusetha umthelela we-ultrasonic odingekayo wenqubo yakho ethile. I-Hielscher's flow cell reactor ekhethekile ifaka i-MPC48 – I-MultiPhaseCavitator (bheka isithombe ngakwesokunxele) – ivumela ukufaka umjovo esigabeni sesibili ngama-cannulas angama-48 njengesixhaxha esisheshayo endaweni eshisayo ye-patitational hot, lapho amagagasi asebenza ngokweqile e-ultrasound asabalalisa izigaba zombili ngengxube ye-homogeneous. I-MultiPhaseCavitator ilungele ukuqala amaphuzu we-crystal seeding futhi ilawule ukusabela kwezulu kwe-perovskite nanocrystals.
Ama-processor we-Hielscher wezimboni ze-Hielscher angakhipha ama-amplopes aphakeme ngokweqile. Amandla afinyelela ku-200µm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ekusebenzeni kwe-24/7. Okokuphakama okuphezulu kakhulu, i-sonotrodes eyenziwe ngezifiso ye-ultrasonics iyatholakala. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Amakhasimende ethu anelisekile ngokuqina okuqinile nokuthembeka kwezinhlelo zikaHielscher Ultrasonic. Ukufakwa emikhakheni yesicelo esisebenza kanzima, izindawo ezifunwayo kanye nokusebenza kwe-24/7 kuqinisekisa ukucutshungulwa okusebenzayo nokunempilo. Ukuqina kwenqubo ye-Ultrasonic kunciphisa isikhathi sokucubungula futhi kufinyelela imiphumela engcono, ie izinga eliphakeme, isivuno esiphakeme, imikhiqizo emisha.
I-Perovskite yigama elichaza amaminerali i-Perovskite (eyaziwa nangokuthi yi-calcium titanium oxide noma i-calcium titanate, ifomula yamakhemikhali i-CaTiO3) kanye nesakhiwo esithile. Ngokuya ngegama elifanayo, i-mineral Perovskite ifaka isakhiwo se-perovskite.
I-Perovskite compounds ingenzeka ngesakhiwo se-cubic, tetragonal noma orthorhombic futhi ibe nefomula yamakhemikhali i-ABX3. A no-B ziyizicucu, kuyilapho u-X emele i-anion, enamathela kubo bobabili. Kumakhompiyutha e-perovskite, i-A cation inkulu kakhulu kune-B cation. Amanye amaminerali anesakhiwo se-perovskite yiLoparite neBridgmanite.
Ama-Perovskites anesakhiwo esikhethekile sekristalu futhi kulesi sakhi izinto ezahlukahlukene zamakhemikhali zingahlanganiswa. Ngenxa yesakhiwo esikhethekile sekristalu, ama-molekyuli e-perovskite angakhombisa izakhiwo ezahlukahlukene ezibalulekile, njengokuthi i-superconductivity, i-sumoresistance ephezulu kakhulu, kanye / noma i-Ferroelectricity, eyenza lezo zingxube zihehe kakhulu kwizicelo zezimboni. Ngaphezu kwalokho, inani elikhulu lezinto ezahlukahlukene lingahlanganiswa ndawonye ukwenza izakhiwo ze-perovskite, ezenza ukuthi kuhlanganiswe, kuguqulwe futhi kuqiniswe izici ezithile ezibonakalayo. Abaphenyi, ososayensi kanye nabathuthukisi bokwenza inqubo basebenzisa lezo zinketho ukuklama ngokukhetha nokwandisa izici zomzimba, zokukhanya nezikagesi.
Izakhiwo zabo ze-optoelectronic zenza ama-hybrid perovskites ama-candidate afanele kuma-solar cell application kanye nama-solovskite cell solar awubuchwepheshe obuthembisayo, obungasiza ukukhiqiza inani elikhulu lamandla ahlanzekile, anendawo ezungezile.
Imikhawulo ebuhlungu ye-optoelectronic ye-‐ crystalline perovskite eyodwa kubikwe ezincwadini:
I-MAPbI31.51 eV 821 nm2.5 (SCLC) 10−8τs = 22 ns inafB = 1032 ns PL2 × 10102-8 µm3.3 × 1010I-MAPbBr3I-2.18 eV 574 nm24 (SCLC)
ama-awa = 28 ns
1.3-4.3 µm3 × 1010I-MAPbI31.51 eV 820 nm67.2 (SCLC)
ama-awa = 18 ama-nsB = 570 ns PL
1.8-10.0 µm1.4 × 1010I-MAPbI3850 nm164 ± 25 Hole ukuhamba (SCLC) 105 Hole ukuhamba (iHholo) 24 ± 6.8 elektrron SCLC
I-82 ± 5 µs TPV 95 ± 8 µs improsance spectroscopy (IS) 9 × 109 p175 ± 25 µm3.6 × 1010 umgodi 34,5 × 1010 ye-elektroniMAPbI31,53 eV 784 nm34 IHholo
I-8.8 × 1011 P
I-1.8 × 109 yembobo engu-4.8 × 1010 ye-elektroniMAPbBr31,53 eV 784 nm34 IHholo
I-1.8 × 109 yembobo engu-4.8 × 1010 ye-elektroniMAPbBr3I-2.24 eV 537 nm4.36 Hall
2.6 × 1010 umgodi 1.1 × 1011 ye-elektroniMAPbCl3I-2.24 eV 537 nm4.36 Hall
2.6 × 1010 umgodi 1.1 × 1011 ye-elektroniMAPbCl3I-2.97 eV 402 nm179 Hall
I-MAPbCl3I-2.88 eV 440 nm42 ± 9 (SCLC) 2.7 × 10-8ama-awa = 83 ama-nsB = 662 ns PL4.0 × 109 p3.0-8.5 µm3.1 × 1010I-FAPbI3I-1.49 eV 870 nm40 ± 5 Hole ukuhamba kwe-SCLC1.8 × 10-8
Igebe le-band noma ukuqala kokufaka
Ukuhamba [cm2 V-1 S-1]
Ukuziphatha [Ω-1 cm-1]
Isikhathi sokuthwala sendlela kanye nendlela
Ukuhlushwa kwesithwali bese uthayipha [cm-3] (n noma p)
Ubungakanani besicupho [cm-3]
I-MAPbBr3 I-2.21 eV 570 nm 115 (TOF) 20-60 (IHholo) 38 (SCLC) ama-awa = 41 ama-nsB = 457 ns (PL) 5 × 109 kuya ku-5 × 1010 P 3–17 µm 5.8 × 109